ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အီဒီယမ် (၁၀) ခု - Myanmar Network
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အီဒီယမ် (၁၀) ခု
Posted by Soe Soe Win on June 19, 2014 at 12:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူသုံးများတဲ့ အီဒီယမ်တွေနဲ့ သူတို့ကို သုံးနှုန်းပုံ ဥပမာများကို လေ့လာကြပါစို့။
1. A for effort (ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် အဆင့် ' A ' ပေးခြင်း)
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း တစ်စုံတစ်ရာကို ဖြစ်မြောက်ဖို့ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားခဲ့တာကို အသိအမှတ်ပြုလိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
ဥပမာ - The cake didn't turn out like she had planned, but I give her 'A' for effort. (ကိတ်မုန့်ဟာ သူစီစဉ်ထားသလို ဖြစ်မလာပေမဲ့ သူ့ကြိုးစား အားထုတ်မှုကို ကျွန်တော် အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။)
2. Copycat (စာခိုးချသူ / ရုပ်၊ ဟန်၊ အသံလိုက်တုသူ)
သူတစ်ပါးရဲ့စာကို ကူးချသူ (သို့) တခြားသူရဲ့ ရုပ်၊ ဟန်၊ အသံကို လိုက်တုသူကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - Janie isacopycat – she was looking at my answers while we were taking the test. (ဂျေနီက စာခိုးချသူဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေနေတုန်းမှာ သူငါ့အဖြေတွေကို ခိုးကြည့်တယ်။)
3. Learn (something) by heart (အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်း)
အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အလွတ်ရအောင် ကျက်မှတ်ခြင်း လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဥပမာ - I have played that song for so long that I have learnt it by heart and don't even have to look at the music. (ဒီသီချင်းကို တီးလာတာကြာပြီမို့လို့ အလွတ်တောင်ရနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂီတ သင်္ကေတတွေကိုတောင် ကြည့်ဖို့မလိုတော့ဘူး။)
4. Pass with flying colours (အဆင့်မြင့်မြင့်အောင်ခြင်း)
စာမေးပွဲတစ်ခုကို လွယ်ကူစွာနဲ့အောင်ပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းရတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
ဥပမာ - Tod must have studiedalong time because he passed the test with flying colours. (တော့(ဒ်)ဟာ စာမေးပွဲကို အလွယ်တကူ အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ အောင်လာတဲ့အတွက် သူဟာ အချိန်အကြာကြီး ကြိုးစား စာကျက်ခဲ့တာဖြစ်ရမယ်။)
5. Play hooky (ကျောင်းပြေးခြင်း)
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ယောက်က ကျောင်းမတက်ပဲ ကျောင်းပြေးတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
ဥပမာ - My friends are playing hooky today so they can be the first in line for the concert tickets this afternoon. (ဒီနေ့လည်မှာ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲအတွက် လက်မှတ်တန်းစီတဲ့နေရာမှာ ရှေ့ဆုံးက နေရာရဖို့ ဒီနေ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ ကျောင်းပြေးကြတယ်။)
6. Drop out of school (ကျောင်းဆက်မတက်ခြင်း)
တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျောင်းကို ပြီးဆုံးသည်အထိ ဆက်မတက်ပဲ နေခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဥပမာ - Maurice had to drop out of school when his mother became ill so that he could help take care of her. (သူ့အမေ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါ သူ့အမေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် မောရစ်(စ်)ဟာ ကျောင်းဆက် မတက်ပဲ နေလိုက်ရပါတယ်။)
7. Put your thinking cap on. (လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားခြင်း)
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အလေးအနက်ဆင်ခြင်စေလိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါသည်။
ဥပမာ - We're all going to put our thinking caps on to tackle this big problem. (ဒီပုစ္ဆာကြီးကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ငါတို့အားလုံး လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြမယ်။)
8. Show of hands (ဆန္ဒပြုရန် လက်ထောင်ခြင်း)
တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဲဆန္ဒပေးရန်အတွက် လက်တွေ ထောင်ကြတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
ဥပမာ - Byashow of hands, how many of you prefer to have the test on Friday? (သောကြာနေ့ ကျမှ စာမေးပွဲကို စစ်ဖို့လိုလားတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတာကို လက်ထောင်ပြီး မဲပေးကြမယ်။)
9. Teacher's pet (ဆရာ့အချစ်တော်)
ဆရာက အရေးပေးသော ဆရာ့အသည်းစွဲ ကျောင်းသား/သူကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - Jonathan is the teacher's pet. She always calls on him first. (ဂျွန်နသန်ကတော့ ဆရာမရဲ့ အချစ်တော်ပဲ။ ဆရာမက သူ့ကိုပဲ အမြဲအရင်ဆုံး ခေါ်တယ်။)
10. Bookworm (စာဂျပိုး)
စာအလွန်တရာဖတ်သော သူကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - She is suchabookworm! She seems to haveanew book every day! (သူဟာ တကယ့်ကို စာဂျပိုး ပဲ။ သူ့မှာ နေ့တိုင်း စာအုပ်အသစ်တစ်အုပ်ရှိပုံရတယ်။)
Voxy.com မှ Jessica Weeg ၏ 10 Popular School Idioms ကို ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူမြားနှငျ့သကျဆိုငျသညျ့ လူသုံးမြားတဲ့ အီဒီယမျတှနေဲ့ သူတို့ကို သုံးနှုနျးပုံ ဥပမာမြားကို လလေ့ာကွပါစို့။
1. A for effort (ကွိုးစားအားထုတျမှုအတှကျ အဆငျ့ ' A ' ပေးခွငျး)
တဈစုံတဈယောကျဟာ အောငျမွငျမှုမရှိခဲ့ပမေဲ့လညျး တဈစုံတဈရာကို ဖွဈမွောကျဖို့ အပတျတကုတျကွိုးစားခဲ့တာကို အသိအမှတျပွုလိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုပါတယျ။
ဥပမာ - The cake didn't turn out like she had planned, but I give her 'A' for effort. (ကိတျမုနျ့ဟာ သူစီစဉျထားသလို ဖွဈမလာပမေဲ့ သူ့ကွိုးစား အားထုတျမှုကို ကြှနျတျော အသိအမှတျပွုပါတယျ။)
2. Copycat (စာခိုးခသြူ / ရုပျ၊ ဟနျ၊ အသံလိုကျတုသူ)
သူတဈပါးရဲ့စာကို ကူးခသြူ (သို့) တခွားသူရဲ့ ရုပျ၊ ဟနျ၊ အသံကို လိုကျတုသူကို ချေါခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ - Janie isacopycat – she was looking at my answers while we were taking the test. (ဂနြေီက စာခိုးခသြူဖွဈပါတယျ။ စာမေးပှဲဖွနေတေုနျးမှာ သူငါ့အဖွတှေကေို ခိုးကွညျ့တယျ။)
3. Learn (something) by heart (အလှတျကကျြမှတျခွငျး)
အကွောငျးအရာတဈခုခုကို ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ အလှတျရအောငျ ကကျြမှတျခွငျး လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
ဥပမာ - I have played that song for so long that I have learnt it by heart and don't even have to look at the music. (ဒီသီခငျြးကို တီးလာတာကွာပွီမို့လို့ အလှတျတောငျရနပွေီ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဂီတ သငေ်ျကတတှကေိုတောငျ ကွညျ့ဖို့မလိုတော့ဘူး။)
4. Pass with flying colours (အဆငျ့မွငျ့မွငျ့အောငျခွငျး)
စာမေးပှဲတဈခုကို လှယျကူစှာနဲ့အောငျပွီး အမှတျကောငျးကောငျးရတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုပါတယျ။
ဥပမာ - Tod must have studiedalong time because he passed the test with flying colours. (တော့(ဒျ)ဟာ စာမေးပှဲကို အလှယျတကူ အဆငျ့မွငျ့မွငျ့နဲ့ အောငျလာတဲ့အတှကျ သူဟာ အခြိနျအကွာကွီး ကွိုးစား စာကကျြခဲ့တာဖွဈရမယျ။)
5. Play hooky (ကြောငျးပွေးခွငျး)
ကြောငျးသားတဈယောကျယောကျက ကြောငျးမတကျပဲ ကြောငျးပွေးတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုပါတယျ။
ဥပမာ - My friends are playing hooky today so they can be the first in line for the concert tickets this afternoon. (ဒီနလေ့ညျမှာ ဂီတဖြျောဖွပှေဲအတှကျ လကျမှတျတနျးစီတဲ့နရောမှာ ရှဆေုံ့းက နရောရဖို့ ဒီနေ့ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးတှေ ကြောငျးပွေးကွတယျ။)
6. Drop out of school (ကြောငျးဆကျမတကျခွငျး)
တဈစုံတဈယောကျက ကြောငျးကို ပွီးဆုံးသညျအထိ ဆကျမတကျပဲ နခွေငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။
ဥပမာ - Maurice had to drop out of school when his mother became ill so that he could help take care of her. (သူ့အမေ နာမကနျြးဖွဈတဲ့အခါ သူ့အမကေို ပွုစုစောငျ့ရှောကျဖို့အတှကျ မောရဈ(ဈ)ဟာ ကြောငျးဆကျ မတကျပဲ နလေိုကျရပါတယျ။)
7. Put your thinking cap on. (လေးလေးနကျနကျ စဉျးစားခွငျး)
တဈစုံတဈယောကျကို အလေးအနကျဆငျခွငျစလေိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုပါသညျ။
ဥပမာ - We're all going to put our thinking caps on to tackle this big problem. (ဒီပုစ္ဆာကွီးကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့အတှကျ ငါတို့အားလုံး လေးလေးနကျနကျ စဉျးစားကွမယျ။)
8. Show of hands (ဆန်ဒပွုရနျ လကျထောငျခွငျး)
တဈစုံတဈရာနဲ့ပတျသကျပွီး မဲဆန်ဒပေးရနျအတှကျ လကျတှေ ထောငျကွတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုပါတယျ။
ဥပမာ - Byashow of hands, how many of you prefer to have the test on Friday? (သောကွာနေ့ ကမြှ စာမေးပှဲကို စဈဖို့လိုလားတဲ့သူ ဘယျနှဈယောကျလဲဆိုတာကို လကျထောငျပွီး မဲပေးကွမယျ။)
9. Teacher's pet (ဆရာ့အခဈြတျော)
ဆရာက အရေးပေးသော ဆရာ့အသညျးစှဲ ကြောငျးသား/သူကို ချေါခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ - Jonathan is the teacher's pet. She always calls on him first. (ဂြှနျနသနျကတော့ ဆရာမရဲ့ အခဈြတျောပဲ။ ဆရာမက သူ့ကိုပဲ အမွဲအရငျဆုံး ချေါတယျ။)
10. Bookworm (စာဂပြိုး)
စာအလှနျတရာဖတျသော သူကို ချေါခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ - She is suchabookworm! She seems to haveanew book every day! (သူဟာ တကယျ့ကို စာဂပြိုး ပဲ။ သူ့မှာ နတေို့ငျး စာအုပျအသဈတဈအုပျရှိပုံရတယျ။)
Voxy.com မှ Jessica Weeg ၏ 10 Popular School Idioms ကို ကောကျနှုတျ ဘာသာပွနျဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Myo Myo on August 20, 2014 at 18:31
My father puts his thinking cap on to solve the big problems.
Permalink Reply by Nwe Nwe Khaing on January 13, 2015 at 22:39
Permalink Reply by phyuhtun on May 20, 2015 at 0:09
Permalink Reply by kyawminthein on May 20, 2015 at 20:45
Permalink Reply by Hmu Pyae Shan on May 21, 2015 at 17:56
Thanksalot.I'm on cloud 9ဆိုတာဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းသိချင် ပါတယ်
Permalink Reply by Ashin Khema Nanda on September 29, 2015 at 8:29
Permalink Reply by Henry Austin on September 29, 2015 at 12:28
Thank you very much ,BC.